Global Voices teny Malagasy » Okraina : Mibilaogy hamantarana ny momba ny tena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Mey 2011 8:34 GMT 1	 · Mpanoratra Maryna Reshetnyak Nandika (fr) i Thalia Rahme, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Okraina, Fahasalamàna, Rising Voices
Ho an'ireo mpidoroka zava-mahadomelina, mitondra fiovana azo tsapain-tanana eo amin'ny fiainany ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanoloana [izay iankinana] . Ny fiverenana amin'ny fiainana mahazatra taorian'ny fahazarana mampiasa tsindrona zava-mahadomelina  teo amin'ny fiainana, dia mitaky fiovana tsy eo anivon'ny fomba fiaina ihany fa fiovana koa eo anivon'ny toe-tsaina. Tokony hihevitra indray ny momba ny fiainany, ny toerana misy azy eo amin'ny fiaraha-monina, ny fifandraisany amin'ny hafa ny marary. Ho an'ny hafa kosa, iray amin'ireo fitaovana manampy amin'ny fandinihan-tena sy ny fizarana ny tahotra mbamin'ny ny ahiahy amin'ireo olona izay mitovy tranga amin'ny tena ny fanaovana bilaogy.
Mitantara betsaka ny traikefa mampiotam-po nananany mikasika ny fandraisany anjara tamin'ny tetikasa momba ny fampihenana ny loza ara-pahasalamana  ireo bilaogera niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny Fikambanan'ireo mpiaro ny fitsaboam-pisoloana ao Okraina . Ity ohatra iray tamin'ny lahatsoratra  an'i CHE ZET  mipetraka ao Tchernihiv :
Esenin nilazalaza ny fihetsehampony manoloana ny lahatsoratra izay midera vehivavy iray nahomby tanteraka tamin'ny fialana amin'ny zava-mahadomelina tsy nisy fanampian'ny tetikasa ho fampihenana ny loza ara-pahasalamana. Nanamarika izy hoe :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/05/20/17653/
 fanoloana [izay iankinana]: http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_de_substitution
 tsindrona zava-mahadomelina: http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_injection
 fampihenana ny loza ara-pahasalamana: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9duction_des_risques_sanitaires
 Fikambanan'ireo mpiaro ny fitsaboam-pisoloana ao Okraina: http://astau.org.ua/
 CHE ZET: http://astau.org.ua/blog/aleksandr/
 Nanamarika izy hoe: http://astau.org.ua/blogi/a_kakaja_ja/